Baolina kitra Ranomasimbe Indianina – Azon’ny Cnaps Sport ihany ny amboaran’ny UFFOI - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Baolina kitra Ranomasimbe Indianina – Azon’ny Cnaps Sport ihany ny amboaran’ny UFFOI
Hafaliana ny an’ny Cnaps Sport nibata amboara tao amin’ ny kianja Rabemananjara
Tonga amin’ny niriany. Norom- bahin’ny Cnaps Sport ny amboaran’ny Ranomasimbe Indianina na ny Uffoi, ho an’ireo ekipa tompondaka, rehefa lavon’ izy ireo tamin’ny isa 3 no ho 0 ny FC Saint Paul tao amin’ ny kianja Rabemananjara, omaly. Nihoaran-dry Michael Rabeson, kapitenin’ny Cnaps Sport, ny isa 1 no ho 2 nandresen’ny Renioney azy ireo tamin’ny lalao mandroso. Tombony ho an’ io ekipa tompon’ny amboaran’ i Madagasikara 2011 io ny fampiantranoana ny lalao miverina sy ny hatsaran’ ny kianja Rabemananjara vita amin’ny bozaka artifisialy ary ny efa fahazarana milalao amin’izany kianja izany.
Nanindry anefa ry zareo Renioney nandritra ny 20 minitra voalohany tamin’ ity lalao miverina ity, saingy nangatsiaka tampoka izy ireo taorian’ny tifi-davitra tany amin’ny 40 metatra nataon’i Jimmy Simouri teo amin’ny minitra faha-24, ka nampikobana ny harato nandrasan’i Pelops Mathieu. Isa tokana nisarahan’ny roa tonta teo am-pialan-tsasatra io.
Teo amin’ny fizaram-potoana faharoa dia nampi- seho ny fahaizany tanteraka ireo mpilalaon’i Jean Marie Razafiarison sy Rafà, samy mpanazatra ny Cnaps Sport, ka nanampy ny isa teny amin’ny solaitrabe. Feno ny hafaliana teo amin’ny Cnaps Sport nandritra ny fandraisana ny amboara.
KICKBOXING – «GALA DE BOXE PIEDS-POINGS»-Hisolo tena antsika any La Réunion ny Fihezama(0)
Mikasa ny hamerina ny zava-bita tamin’ny taon-dasa ny Fitaizana ny herin’ny Zatovo Malagasy (Fihezama) amin’ny fifaninanana «Gala de boxe pieds-poings», hotontosaina any La Réunion amin’ny 13 desambra ho avy izao. Tamin’ny andiany 2012 dia nanjakazaka tanteraka ry Anigael Gastros sy Rasta ary Stéphane. Mpikatroka efatra kosa no halefan’io sampana kickboxing eo anivon’ny Fihezama io amin’ity
BAOLINA KITRA – «SUPERCOUPE 2013»-Hanala vela amin’ny Cnaps Sport ny AS Saint-Michel etsy Mahamasina(0)
Hamarana tanteraka ny taom-pilalaovan’ny taranja baolina kitra eo amin’ny sehatra nasionaly ny AS Saint-Michel sy ny Cnaps Sport, amin’ny alahady ho avy izao, mandritra ny «Supercoupe», hatao etsy Mahamasina. Fotoana iray hoentin’ny ekipan’ny AS Saint-Michel hanaporofoana fa solafaka ihany izy ireo nanoloana ny Cnaps Sport, tamin’ny lalao famaranana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara,
HAIADY «CANNE DE COMBAT»-Navotan’i Sitraka José Rakotonindriana ny voninahi-pirenena(0)
Tsy nitsiky tamin’ny mpikatroka malagasy ny vintana, nandritra ny andiany faha-fiton’ny fiadiana izay ho tompondakan’ny Ranomasimbe Indianina teo amin’ ny taranja «canne de combat», notanterahina ny faran’ny herinandro teo, tany Antsirabe. I Sitraka José Rakotonindriana irery no hany niambozona medaly volamena tamin’io fifaninanana iraisam-pirenena io. Tsy resy mihitsy i Sitraka tamin’ ireo katrok’ady enina natrehiny. Medaly volafotsy telo kosa no nanampy izany tamin’ny alalan’i Hery Rindra Malala Andriamanampy sy José Mickael Randrianasolo ary Rijaniaina. Nanamarika ny hetsika kosa ny fahabangan’i Bernadette Ravaoarisoa, mpikatroka malagasy efa intelo voahosotra ho tompondakan’ny Ranomasimbe Indianina. Nanjakazaka tanteraka ny mpikatroka renioney tamin’ireo lalao famaranana nihaonany tamin’izy telo ireo. Medaly volamena efatra no naho-ron’i La Réunion tamin’io fifaninana io. Niara-dalana tamin’izany hetsika izany ny fifaninanana andiany voalohany ho an’ny «savate pro», nokarakarain’ny federasiona malagasin’ny boxe savate française. Medaly volamena enina no azon’ny solontenan’ Analamanga tamin’io fifaninanana io raha telo ny an’i Vakinankaratra. Ny mpikatroka avy any Itasy kosa no laharana fahatelo, nahazo medaly iray. Roméo Andriamihaja
HAZAKAZA-PIARAKODIA – SLALOM-Hofaranan’ny ACCT eny Imerintsiatosika ny taona Ny fifaninanana slalom, karakarain’ny ACCT eny Imerintsiatosika amin’ny 14 – 15 desambra ho avy izao, no hoentin’ny hazakaza-piarakodia mamarana ny taom-pilalaovana 2013. Nafindra toerana eny amin’ny toeram-pihazakazahan’ny Serana Racing Kart izy ity raha teny Ivato no nampiantrano tamin’ny taon-dasa. Tsy hampiova firy intsony ny anaran’ny tompondakan’i Madagasikara ity fifaninanana ity, saingy kosa hoentina manakatona tanteraka
DUATHLON-Fifaninanana roa sosona hatao any Vakinankaratra Hikarakara hetsika goavana roa miavaka tsara ny ligin’i Vakinankaratra ho an’ny triathlon amin’ny 15 desambra ho avy izao.Mandritra ny maraina no hanaovana ny Aquathlon, fifaninanana fanazarana ireo ankizy mpianatra, ao Antsirabe. Ny hariva kosa no hotontosaina any Betafo ny fifaninanana Duathlon ho an’ireo efa kalaza amin’ity hazakazaka an-tongotra sy am-bisikileta mifangaro ity.«Irariana ny handraisan’ireo mpihazakazaka
Baolina kitra, Mpanoratra Rijakely, 11.06.2012, 09:26	FIARAHAMONINA
platoon leadership course program tadalafil 20mg kamagra synthroid low potassium why people take abilify the shining explained bear suit - the shining explained bear suit